Arsenal Oo Wakhti Daayacii Dhibic Ka Boobtay Bournemouth
HomeWararka MaantaArsenal Oo Wakhti Daayacii Dhibic Ka Boobtay Bournemouth
03/01/2017 Abdiwahab Ahmed
Oliver Giroud ayaa ka caawiyey Arsenal inay dhibic khasab kaga qaadato Bournemouth oo daqiiqadihii u horreeyey ciyaartaba saddex gool oo daran doorri ah kaga nixisay Arsenal iyo da’ yarteeda kubbad isku dhiibka badan.
Daqiiqadihii 16aad iyo 21aad ayey laba gool u kala dhaliyeen Charlie Daniels iyo Callum Wilson kooxda Bournemouth, waxaanay qaybta hore ku dhamaatay 2-0, laakiin markii la isugu soo noqday qaybta labaad ee ay maraysay daqiiqaddii 58aad ayey mar kale Bournemouth hoggaanka sii dheeraysatay oo ciyaarta ka dhigtay 3-0, waxaana goolkaas u saxeexay laacibka Ryan Fraser oo aakhirkiina casaan lagaga saaray garoonka.
Bournemouth ayaa heshay fursad ay ciyaarta kaga dhigi karaysay 4-0, laakiin nasiibka ayaan u saamixin, waxaase intaa kaddib bilaabmay wakhtigii Arsenal, waxaana goolasha u bilaabay Alexis Sanchez iyo Lucas Perez oo dhaliyey laba gool oo shan daqiiqadood oo kali ahi u dhexeeyeen iyagoo kaalmo ka helaya Giroud oo labada goolba ka shaqeeyey.
Oliver Giroud ayaa dhibicda ka farxisay Arsenal u keenay wakhti daayacii lagu daray ciyaarta, markaas oo kubbad dhexda laga soo qaaday uu dhex dhigay shabaqa Bournemouth oo uu waardiye ka ahaa Artur Boruc.
Guushan ayaa Arsenal ay ku heshay 40 dhibcood iyo booska afraad, laakiin waxay Sugaysaa Tottenham oo kulankeeda la ciyaaraysa Chelsea, taas oo haddii ay guuleysato yeelan doonta 42 dhibcood.
19 -6 16
20 -27 13
Daawo Casharkii Ay Chelsea U Dhigtay Meccabi Tel Aviv
Laurent Koscielny Oo Ku Wargeliyey Masuuliyiinta Arsenal Inuu Ka Tegayo